संस्थालाई विदेश यात्राको मात्र माध्यम बनाउदै कलाकारहरु
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कुराहरु हेर्ने हो भने कुरा काट्नेहरुका लागि दिन विताउनका लागि सजिलो खुराक बन्छ । भाई फुटे गवार लुटेको गतिलो उदाहरणको रुपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा काम गर्दा पत्रकार,कलाकार ,निर्माता,निर्देशक मात्र होईन हल सञ्चालक पनि कुन पार्टीको हो भनेर विचार गर्नु पर्ने स्थितीपैदा भई सकेको छ । हरेक किसिकमका काममा पार्टीगत विचारका हालिमुहालिका कारण साधारण मेकअप म्यान देखि जुनसुकै कामगर्नेका लागि पनि दिनानु दिन काम गर्नका लागि असहज परिस्थिती भित्रदैछ यस क्षेत्रमा ।
यहि पार्टीगत बिचारधाराको हालिमुहालिको कारण पनि हुन सक्छ चलचित्र क्षेत्रका कुनै संघसंस्थाले राम्रो किसिमको काम गर्न खोजे पनि उपयुक्त बातारण मिल्न सकिरहेको देखिदैन् । यति सम्म कि आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्र्तगतको संघ संस्थाका कार्यक्रममा पनि यो क्षेत्रका मानिसले किन वितृष्णा देखाउन थालेका छन त ? यो नितान्त सम्बन्धित संघ संस्थाले विचार गर्नु पर्ने कुरा हो । पछिल्लो समयमा यसको गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको कलाकार संघ । पछिल्ला क्रियाकलापलाई विना स्वार्थ हेर्नेहो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै सक्रिय संस्थाको रुपमा कलाकार संघलाई लिन सकिन्छ ।
सहि लाई सहि भन्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो बिभिन्न जस अपजसको समना गरिरहेका कलाकार संघका अध्यक्ष नवल खड्काको कार्यकालमा यो संस्थाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हितका लागि धेरै कार्यहरु पनि गर्यो । र बिभिन्न कार्यक्रहरु बेलाबेलामा आयोजना गरि कलाकार संघलाई सक्रिय संस्थाको रुपमा चिनाएको पनि छ । तर विडम्वना त्यहि संघ अन्र्तगतको व्यक्तिहरुले कलाकार संघकै कार्यक्रम प्रति किन यस्तो वितृष्ण जगाएका छन् त ? पव्लिक फेसहरु किन आफु कार्यरत क्षेत्रको संघको कार्यक्रममा जादैनन् ? प्राय जसो कलाकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केही मात्र पुरानका कलाकारहरुको मात्र अनुहार देखिने गरेको छ ।
खोई कहाँ गए नयाँ पुस्ता ? संघमा आजिवन , मानार्थ र साधारण सबै किसिमका सदस्य गरेर लगभग बाह्र सयको हारा हारिमा कलाहरुहरुको नाम संस्थामा दर्ता छ । हरेक कार्यक्रममा लगभग सबैलाई जानकारी गराउने गरेको पाईन्छ । पच्चिस तिस जना कलाकारहरु संघमा दैनिक आउने गरेको संघका अध्यक्ष नवल खड्का बताउछन् । ति मध्ये महिनामा पन्ध्र देखि विस जना कलाकारहरु विदेश यात्राका लागि निस्कन्छन् , त्यहि संस्थाको सिफारिस लिएर । दुई तिन महिनामा एक चोटी संस्थाले कलाकारकै हितको लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा किन सहभागि हुदैनन् कलाकारहरु ? यो सोचनिय बिषय बनेको छ ।
के कलाकार संघ लाई कलाकारहरुले ढाल त बनाईरहेको छैनन् ? होईन भने कलाकार संघको हरेक कार्यक्रममा किन कलाकारहरुको मुख देख्न गाह्रो पर्ने गर्यो त ?